XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh iyo C/weli Gaas oo hal arrin isku qabsaday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh iyo C/weli Gaas oo hal arrin isku qabsaday
Ilo xog-ogaal ah oo aynu ka helayno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ay weli isku mari la yihiin dhowr qodobo oo ku saabsan doorasha dalka ka dhici doonto dalka 2016-ka.
Qodobada la isku mari la’yahay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah goobta lagu soo xulaayo xildhibaanada labada aqal ee loo qoondeeyay beesha deegaanada Khaatumo, waxaana Puntland ay ku doodeysaa in dhamaan xildhibaanada beeshaasi lagu soo xulo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Dhinaca kale, siyaasiyiin iyo odayaal caan ah oo kasoo jeeda deegaanada Khaatumo ayaa hore dacwad u gudbiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna madaxweynaha kaga dalbadeen in loo madax banaaneeyo beeshooda soo xulista xubnaha uga mid noqonaya labada aqal ee Baarlamaanka cusub.
Arrintaasi ayaa sida la sheegay keentay in madaxweyne Xasan Sheekh uu dalbado in xildhibaanada Khaatumo intooda badan lagu soo xulo magaalada Muqdisho, taasoo uu ku gacan seyray madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Ugu dambeyntii, xildhibaanada Khaatumo ee haatan ka midka ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa hore loo qeybiyay laba qeybood, kaas oo qeyb ka mid ah ay soo xuleen odayaasha beeshaasi, halka Puntland ay qeyb ka mid ah soo xushay.
Si kastaba ha ahaatee, shirka oo maanta la isku mari waayay islamarkaana dib loogu dhigay in xiritaanka shirkaas laga dhigo maalinta sabtida ah ayaa laga rajo qabaa in xal laga gaaro arrinta xildhibaanada beelaha Khaatumo iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay maqaamka Muqdisho.